ဘယ်လိုအစိုးရမှတောင့်မခံနိုင်တဲ့အထွေထွေသပိတ် - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
admin | February 2, 2021 | knowledge | No Comments
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေတ်မှာတုန်းက….. အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမပါဘဲ အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့လိုက်ကြတယ်….ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက….ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကို အထွေထွေသပိတ်မှောက်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်…..ပြည်သူတွေကလည်းတာဝန်ကျေပါတယ်…..
အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအကုန်နီးပါးသပိတ်မှောက်ကြပါတယ်…မမှောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်….. ဒီလိုနဲ့ အစိုးရ ယန္တရားရပ်သွားတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ခေါ်ပြီးအစိုးရနေရာပေးရပါတယ်…. နေမဝင်အင်ပါရာဖြစ်တဲ့ ဗြိတိန်တောင် လက်လျော့သွားရတယ်….
သတိပြုစရာအချက်လေးက….သပိတ်မှောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေ လစာမရကြပါဘူး….အဖြတ်ခံကြရပါတယ်….. ဒါပေမယ့် သပိတ်လှန်တဲ့အချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက….. သပိတ်မှောက်ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကို လစာ အပြည့်ပြန်ပေးပါတယ်….မျက်နှာလိုမျက်နှာရ….သပိတ်မမှောက်ဘဲ ရုံးတက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့…..တစ်ပြားမှမပေးခဲ့ပါဘူး…….
အခုလည်း သပိတ်မှောက်မဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ကိုဘာမှစိတ်မပူနဲ့ လစာ ၁ နှစ်စာကိုပေါင်းပြီးထောက်ပံ့မယ်လို့သာ ဝန်းရံကြရင်..ဘယ်လိုအစိုးရခံနိုင်မလဲ……
ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ လက်ရှိ အနေအထား ယိမ်းယိုင်သွားမှာ တွေးပူပြီး သပိတ် မမှောက်ရဲတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ရှိမှာပါ။ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ပေါ့လေ။
ဒီ တော်လှန်ရေးက ကြိုးစားသလောက် အရာထင်မယ့် တော်လှန်ရေးပါ။
တစ်ကမ္ဘာလုံးက စစ်အာဏာရှင် မုန်းတဲ့ သူတွေအားလုံး ကိုယ့်နောက်မှာ ရှိပါတယ်။ ရဲရဲသာ ကြိုးစားရင် ရာနှုန်းပြည့် အောင်မြင်မယ့် တော်လှန်ရေးပါ။
စစ်အာဏာရှင် လုံဝ ကျဆုံးသွားမယ့် တော်လှန်ရေးပါ။
ကျူဘား စစ်အာဏာရှင်အစိုးရကိုတော်လှန်းတုန်းကလည်း…. ဖီဒယ်ကစ္စထရိုကို ဖမ်းထားထောင်ချထားပြီး စစ်အာဏာရှင်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပါတယ်…. ပြည်သူတွေအားလုံးက ရွေးကောက်ပွဲကိုလုံးဝမဲမထည့်ဘဲ…. ကစ္စထရိုကိုပြန်လွှတ်ပေးမှ မဲထည့်မယ်လို့ တင်းခံလိုက်တဲ့အခါ….. ဖီဒယ်ကစ္စထရိုကို မလွှတ်မဖြစ်ပြန်လွှတ်ရတာပါပဲ…..
Civil Disobedience လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် တစ်ဉီးကောင်း၊ တစ်ယောက်ကောင်းနဲ့မရပါဘူး အာဏာသိမ်းသွားတဲ့လူတွေကလည်းဝိုင်းတွန်းရုံမက ကန်ပါချမှဆင်းပေးမယ့်လူမျိုးတွေပါ။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ Civil Disobedience လုပ်နေကြတာနဲ့ လုံလောက်ပြီလား?
NOပါ…အစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတင်မဟုတ်ကျန်တဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းမှန်သမျှနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူလူထုကပါ
ပါဝင်မှရမှာပါ။ ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကိုယ်လည်းခုမှ စာတွေ၊ သူများနိုင်ငံတွေမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေရှာဖတ်ဆဲပါ။
Civil Disobedience ဆိုတာလက်ရှိအစိုးရ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်သူရဲ့ ဉပဒေ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ရပ် စတာတွေအပေါ်အသိအမှတ်ပြုမလိုက်နာနိုင်ကြောင်းပြတဲ့ ပြည်သူတစ်ယောက်ရဲ့အကြမ်းမဖက်သော ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုလို့
နားလည်ပါတယ်။ ဒါဆို အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဘာလုပ်မလဲ? နှုတ်ထွက်စာတင်သူကတင် မထွက်ရင် ဘောင်ထဲကလုပ်လို့ရတာက ခွင့်ရက်ရှည်တင်ပေါ့ မဟုတ်ရင်လည်းရုံးသွား ဒါပေမယ့် အလုပ်တွေကို အချိန်ဆွဲလုပ် အဓိကကအာဏာရှင်စစ်အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းတွေ နှေးသွား၊ရပ်သွားဖို့ပဲ။
အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေကရော ? ဝန်ထမ်းတွေ၊ အလုပ်သမားတွေကမကြပ်တည်းအောင်ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့်တရားမဝင်တဲ့ စစ်အစိုးရကိုဝင်ငွေခွန်တစ်ပြားမှ မပေးနဲ့
လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း ထိုနည်း၎င်းပဲ ဝင်ငွေခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်ပင်ခွန်၊ အမှိုက်ခွန် နောက်ဆုံး မီတာခ၊ ရေဖိုး
ဘာမှမဆောင်နဲ့လာတောင်းရင် ? Civil Disobedience လုပ်နေလို့၊ မင်းတို့ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါ ပါမှဖြစ်မှာ။
မဟုတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံဘာဖြစ်သွားမလဲ မင်းတို့လည်း မြင်ဖူးခဲ့တာပဲ။ အခုငါအခွန်မဆောင်လို့ လက်ဗလာနဲ့ ပြန်သွားပြီး
အထက်လူကြီးဆီပြန်တင်ပြရမှာကြောက်ရင် အစိုးရအလုပ်ကထွက်လိုက် မဟုတ်ရင် ခွင့်ယူလိုက်လို့ ပြောလိုက်ပါ။
ဘာဖြစ်မလဲ ?ပြည်သူမှာသာ အာဏာရှိကြောင်းနဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အခွင့်အရေးကို လေးစားသင့်ကြောင်း ဘယ်သူ့ဘယ်သူကမှကိုယ်မလေးစားတဲ့လူတစ်ယောက်ကစစ်ဖိနပ်နဲ့လာနင်းပြီးအုပ်ချုပ်ရင် ငြိမ်ခံမနေတတ်ကြောင်း သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အပေါ်မှာပြောသလို လူညီမှရမယ်အကုန်ပါမှရမယ် ဆရာဝန်တွေလုပ်နေပြီ ဒို့တော့လက်ပိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ကတော့ စိတ်ချဒီတစ်ခေါက်ကတစ်နှစ်မဟုတ်ဘူး တစ်သက်လုံးစစ်ဖိနပ်အောက်ကမလွတ်တော့ဘူးသာမှတ်လိုက်တော့။
He is 102 years old, but he is stillamonk, who still has the ability to practice the Dhamma.
ကိုဗစ်-19 က ဆံပင်မှာလဲ ကပ်နေတတ်တယ်လို့ သိပြီးတဲ့နောက်မှာ ရန်ကုန် ခုတင် ၅၀၀ အထူးကု ဆေးရုံကြီးရဲ့ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် ICU မှ သူနာပြုတွေ ကတုံး တုံး
တက္ကစီ ငှားစီးမိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်